बजेट चुहावट र निर्वाचन धाँधली छानविन समिति नै बेपत्ता !
ARCHIVE, NEWSPAPER » बजेट चुहावट र निर्वाचन धाँधली छानविन समिति नै बेपत्ता !
काठमाडौं - दोस्रो रणको स्थानीय चुनाव नजिकिए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको धाँधली बारे छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समिती बेपत्ता को स्थितिमा छ । संसदीय अभ्यासमा संसदका अधिकांश महत्पुर्ण काम संसदीय समितमिमार्फत हुन्छन् ।
निममित समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने खास विषका लागि त अलग्गै कार्यादिशासहितको विशेष समिति बनउने अभ्यास छ । तर निर्वाच धाँधली छानविन लगाएतका विशेष विशेष समितिीहरु गठनका बेला ठुलै हल्लाखल्ला भए पनि तिनका काम र प्रतिवेदनबारे विरलै मात्र बहस हुन्छ, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।